The Rohingya News Bank : MNDAA
Showing posts with label MNDAA. Show all posts
တပ်မတော်ကို ICJ အရေးယူရန် ကြိုးပမ်းမှု မြောက်ပိုင်းသုံး ဖွဲ့ ထောက်ခံ
မြန်မာဌာန | သတင်းများခင်မောင်စိုး
ကိုးကန့်တပ်မတော် MNDAA၊ တအာင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ ရခိုင့်တပ်မတော် AA တို့ က မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအပေါ် ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့ တခြားတရားရုံး တွေက အရေးယူရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထောက်ခံကြောင်း နိုဝင်္ဘာလ ၂၈ ရက် မနေ့က ကြေ ညာလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, AA, ICJ, mm, MNDAA, Nay San Lwin, RFA Burmese, TNLA, ကိုနေဆန်းလွင်, မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့
ရခိုင်အရေး မြန်မာစစ်တပ်ရှင်းလင်းချက် ကျောင်းသား သမဂ္ဂတုံ့ပြန်
မဆုမွန် ၊26 မတ်၊ 2019
ရခိုင်စစ်ရေးပဋိပက္ခ မြောက်ဦးပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ရဲ့ထုတ်ပြန် ချက် ဗကသ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ တပ်မတော်အပေါ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တမင်အကွက်ချ အချိန်ကိုက်ဆောင်ရွက်မှုလို့ စစ် တပ်ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ စွပ်စွဲချက်အပေါ် ဗကသအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးက လက်မခံပယ် ချလိုက်ပါတယ်။ NLD အရပ်သားအစိုးရအနေနဲ့ အခုလိုစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ ကြား တင်းမာနေတဲ့ တိုင်းရင်းဒေသတွေက စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီလို့လည်း သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မဆုမွန် အသေးစိတ် တင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, MNDAA, NLD, TNLA, စစ်ရေးပဋိပက္ခ, တပ်မတော်, ဗကသ, လက်နက်ကိုင်အဖွဲ, မြောက်ဦးမြို့
မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ပစ်ခတ်မှု အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာ မဟုတ်ကြောင်း တပ်ပြော
မြောက်ဦးမြို့နယ် ရွာဟောင်းတောကျေးရွာမှာ ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို ၂၀၁၉ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ပေါ်မှာ မနေ့ညပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ် မတော် က အကြောင်းမဲ့ ပစ်ခတ်တာမဟုတ်ဘဲ မြောက်ဦးမြိုပေါ်က လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ တပ်ရင်း တစ်ခုကို AA အဖွဲ့က စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရတာလို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ် ဌာနချုပ် တိုင်းဦးစီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, MNDAA, PSLF, TNLA, တပ်မတော်, မြောက်ဦးမြို့
တပ်မတော် ထိုးစစ်ဆင်တာတွေ ရပ်တန့်ဖို့မြောက်ပိုင်း ၃ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကို ရပ်တန့်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ရခိုင့်တပ်မတော် AA အပါအ၀င် မြောက်ပိုင်းမဟာ မိတ် အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ဒီနေ့ ပူးပေါင်းကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, MNDAA, RFA Burmese, TNLA, တပ်မတော်, မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA လက်နက်ကိုင်တပ်သား တချို့ နဲ့ မြန်မာစစ်တပ် အကြား ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်မှာ ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပြီး RCSS ဘက်က ၂ယောက် ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ RCSS ဘက်က စတင်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် အခုလိုအပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လည်း တပ်မတော် သတင်းပြန်ကြားရေး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ကပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် ကိုဇော် ထက် ရန်ကုန်ကနေ ပေးပို့ထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, MNDAA, RCSS, SSA, ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ, ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ
ရှမ်းပြည်နယ် ကွမ်လုံမြို့နယ် မုံကျက်ကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နေရာ (ကတ်ကြေးပုံစံ)ကို ပြသထားတဲ့ မြေပုံကို တွေ့ရစဉ်
ရှမ်းပြည်နယ် ကွမ်လုံမြို့နယ်အတွင်း MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့က ဒေသခံတွေကို အတင်းအဓမ္မ လူသစ် စုဆောင်းတာ၊ နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့် တပ်မတော်က နယ်မြေရှင်း လင်းတာတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က RFA ကိုပြောပါတယ်။
Labels: 2019, mm, MNDAA, RFA Burmese, ကွမ်လုံမြို့, တပ်မတော်, ရှမ်းပြည်နယ်, သတင်း
Labels: 2019, AA, en, Facebook, Kachin, MNDAA, Myanmar, News
KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်များ။
AA ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၊ MNDAA မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော်၊ KIA ကချင် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့၊ TNLA တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တို့ရဲ့ စာမျက်နှာ တွေကို facebook ကုမ္ပဏီက ဒီနေ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, Facebook, KIA, mm, MNDAA, TNLA
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ကို ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်ဖယ်ရှား
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး လူမှုကွန်ရက် ကနေ ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီက ဒီနေ့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA)၊ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)၊ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA)နဲ့ တအာင်း ပလောင်တပ်ဖွဲ့ (TNLA)တို့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွေကို ဖယ်ရှား လိုက်ပြီး သူတို့နဲ့ဆက်နွှယ်ထောက် ခံတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့် ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: 2019, AA, Facebook, KIA, mm, MNDAA, TNLA, ရခိုင် တပ်မတော်, လက်နက်ကိုင်
Villagers escape armed group
MYAT MOE THU 16 JAN 2019
Three men who had been forcibly recruited by the Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) escaped on January 9, according to the head of Kyan Kyar Kyaing village in Kunlone township, northern Shan State.
The village head was among those who escaped.
Labels: 2019, en, MMT, MNDAA, News, Shan